Norvezy: ny fiainana raha tsy misy ny adin-tsaina - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Norvezy: ny fiainana raha tsy misy ny adin-tsaina
Pasipaoro fanaraha-maso tao Oslo
Mitsiky mpiambina sisintany, niteny ratsy ny alalan ny pasipaoro, milaza mampamangy, ary avy eo dia manafintohina ityAmin'ny teny rosiana dia toa mahatsikaiky, fa tsy ny tongotra, fa ny momba ny zavatra visa. Satria Norvezy amin'ny faritry ny faritra Schengen, tsy maninona izay firenena Schengen namoaka anao ny fahazoan-dalana. Ny fahatsapana fa risible mpiambina mangataka ny endriky ny amiko. Miandry ny sidina mba Bergen manapa-kevitra ny hihinana, ary mitodi-doha any amin'ny seranam-piaramanidina fisotroana.
Maso mihazakazaka avy ny be dia be ny patsabe mofo voasesika amin'ny mavokely salmon sy ny trondro, ny amin'ny maizina volontany trozona hena.
Ka lafo vidy? Tsy misy, manome fiadanana ho ahy, ny mpitari-dalana, Elena, dia ny daty ny resaka sandwich (amin'izao fotoana izao ny isa ny), ny vidiny in-efatra ambany. Ny Norwegians manara-maso tsara ny mahery natiora ny fahasalamana, ny tsy hihinana afa-tsy sakafo vaovao, ny fanatanjahan-tena, ary tsy ny adin-tsaina. Oslo no hany seranam-piaramanidina eto amin'izao tontolo izao, manana ny fitaovana antsoina hoe (feo fandroana). Ety ivelany, ny fitaovana mitovy ny ranonorana tena, izay very tanteraka rehetra ity. Avy any ambony, toy ny hoe avy any an-danitra, nihazakazaka Nightingale warbling, dia ny lehilahy bitsika: Ianao mahery, dia manana elatra, miala sasatra, ary manidina mahagaga, fa fotsiny afaka minitra vitsy dia ho lasa fahazavana sy ny fifaliana, ny harerahana dia lasa.
Olona dia naka ny ranonorana, ao amin'ny fahanginana ny firesahana amin'ny finday, olona iray ny aina, ary ny olona nihaino ny soso-kevitra momba ny elany, manala ny tahotra ny manidina.
Avy Bergen manomboka eo amin'ny lalana mankany amin 'ny Fanjakan' fjords. Ny tanàna faharoa lehibe indrindra any Norvezy, miaraka amin'ny mponina ny fito amby roa-polo arivo ny olona, toerana amin'ny Andrefan'ny firenena, tamin'ny morontsiraky ny ranomasina Avaratra, izay niorina efa-taona lasa izay. Roa andro izy, dia tokony tena manokana, dia mandehana miakatra ny funicular ny fandinihana tokotanin-tsambo ny tendrombohitra Sodina (tsara indrindra amin'ny maraina sy ny masoandro mody) ary ho talanjona ny robina loko ny sleeve ny fjord avy ny hahavony ny vorona manidina, fandehandehanana amin'ny alalan'ny moyen âge Bryggen, dia voatanisa toy ny harenan'izao tontolo izao amin'ny UNESCO. Ary koa buy mareva-doko ny volon'ondry fotsy sweater amin'ny deer, sakafo atoandro, mafana lasopy, vaovao hazan-dranomasina tao amin'ny malaza-tsena ny trondro ary boay ny amin'ny Fahatsiarovana ho an'ny namana: - malefaka salmona, mena caviar ary cod (ny farany ho an'ny tsy hanahirana anaty baoritra amin'ny fantsona) sy ny capsules ny matavy amine omega - sy omega. Ny bergeners hoe mandre avy amin'ny mpitsidika iray ihany ny fitarainana manohitra ny tanàna: firy ny andro dia na eto na probed, kely foana. Edgar Bergen ny tena tanora fanahy, na dia eo aza ny taona. Manatona maika gait, fotsy-volo-kevitra ny olom-pirenena sasany manokana fanasitranana ao an-toerana ny rivotra. Ny eo ho eo ny androm-piainan'ny olona ny zavatra lehilahy taona ny vehivavy.
Isaky ny fonosana ny isa: ny dimy amby roapolo
Norwegians miaina araka ny tokony ho biolojika gadona.
Miara-miasa amin'ny: hatramin'ny enina ambin'ny folo: (ny handao ny toerany alohan'ny dark), dia mandeha be dia be, ary mitaingina ny môtô, ny farany firohotana ny Tongotra (Hiking amin'ny marokoroko lalana), mihinana kely, fa matetika. Ny toaka dia toy ny, fa ao ny antonony ao amin'ny firenena efa ho maina. Ny labiera dia amidy amin'ny olon-tsotra toeram-pivarotana ny valo ambin'ny folo, ny fanahy manokana ao amin'ny tanàna rehetra misy afa-tsy roa. Ny Norwegians dia tena voatokana amin'ny fanehoana ny fihetseham-po, tsy mitsiky ankavanana sy ny ankavia, fa ny fankasitrahana dia angamba ny tena toetra. Eo amin'ny fidirana ho any amin'ny fløibanen funicular ho an'ny zazavavy izay nandatsaka ny kitapo amin'ny turnstile ary niparitaka ny ao anatiny, sy fitohanana. Fa tsy misy ny mahantra ny zavatra tsy namboarina, tsy niantso, antsoina hoe curve.
Ny mpamily ihany koa dia niandry tamim-paharetana sy tsy mahavita ny fipetrahana.
Ho any an-tendrombohitra ny bergeners hitsangana amin'ny masoandro, matetika amin'ny tariby fiara, indrindra fa vonona an-tongotra. Ary rehefa miha-maizina, ny tendrombohitra ny lalana haleha. Ny fanaovana fanatanjahan-tena eto dia tsy malaza, ny endrika fanohanana mavitrika mandeha. Vao maraina dia mahazo amin'ny cruise liner (azonao atao ny mividy tapakila mialoha amin'ny aterineto na any amin'ny biraon'ny boaty eo amin'ny pier), sasin-Sognefjord, ny lava indrindra sy lalina fjord eo amin'izao tontolo izao. Mba jereo ny rehetra ny zato (sy ny sampana efatra heny) azo atao. Na dia ny olona tao ny sambo be dia be, fa koa ny fisian'ny loatra, ka maika, ny fisafidianana ny tsara indrindra, tsy misy dikany. Eny amin'ny talaky maso ny Windows ny faladiany ho an'ny mamaly ny finday teo amin'ny rindrina ranon-dra, nampiseho lahatsary momba ny fjords. Fa ny ankamaroany, mpizaha tany vahoaka teo amin'ny tokotanin-tsambo, na dia teo aza ny rivo-doza, tsy mitsahatra ny mitady handrapaka miala ny fakan-tsary mandalo ny hatsaran-tarehy mendrika ny borosy ny mpanakanto. Tampoka teo ny mpitari-dalana Elena mampiseho ao amin'ny manetry tena mitady trano, sy nilaza fa an'ny sasany eo an-toerana milionera. Ny tompon-menaka tsara sy ny mpampianatra any ambanivohitra amin'ny sekoly ireo tany miaina eo ho eo ny toe-javatra toy ny foto-kevitry ny fiainan ny Norwegians dia tsy mba hiala avy. Ny iray amin'ireo lehibe indrindra ao an-toerana ny mpandraharaha mirotsaka ao amin'ny fanondranana ny salmona, manao lefy jeans sy tsara anaovana moccasins. Ho an'ny fanahy Ula nividy ny nosy sy mandamina ny mozika fety tsy misy teny saram.
Ny malaza indrindra sy ny toeram-pisakafoanana malaza eo amin'ny antitra hazo trano bongo amin'ny marina ravaka.
Ny trano fandraisam-bahiny (CZK isan-alina) dia mety ho tsy misy rivotra-miankina efitrano izay voaisy fipetrahana ao amin'ny fomba hi, fa ny manaitra ny fahitana ny farihy na tendrombohitra.
Ny Norwegians hoe: ny fomba Fijery avy any an-efitra, tsy ny mifamadika amin'izany.
Adala fangatahana, ny trano fandraisam-bahiny dia miorina any an-tendrombohitra avo, jerena amin'ny alalan'ny tery lalana. Miaraka amin'ny valizy tsy afaka ny handeha hiakatra any, mpizaha tany clamber ho afa-maina.
Ny tompony dia Amerikana, raha vao raiki-pitia ny hatsaran-tarehy ity henjana tany.
Ny ankavia dia nametraka ny raharaham-barotra, nividy ny nandao ny mpiandry ondry an-trano, nively ny zaridaina teo akaiky teo. Taorian'ny roa taona avy amin'ny vahiny nihoatra ny fanantenanao. Tsy raiki-tahotra eny na dia ny vidin'ny telo-polo euros isaky ny alina. Izany dia tsy natao ho philosophize amin'ny seho. Tsy misy olona dia tonga mba manamboatra ny mpandaha-teny, raha toa izy ka nametraka ny ratsy fanamafisana, na ny trompetra iray avy nahazo diplaoma Oniversite. Norwegians amin'ny Ankapobeny dia tena ampy sy tsy miankina, sy ny fanajana ny fiainan olon-kafa sy ny tsy hametraka ny fahitana izao tontolo izao, tsy mahagaga raha tsy tonga ao amin'ny Vondrona Eoropeana sy ny satro-boninahitra dia tsy niova. Ankoatra ny hatsaran-tarehy voajanahary, ny fomba fijery avy amin'ny sambo iray cruise liner, ianao no tokony hihaino tsara ny tarehy tanàna Balestrand, Fjærland, Luster, flåm. Fjærland teboka fanombohana ny fitetezam-paritra mba Jostedalsbreen national Park ary ny eponymous glacier. Ao an-tanàna ny Urnes dia tsy manam-paharoa ny Fiangonana, miorina ao an-mahazatra zavatra amin'ny fomba mahitsy, mijoro vatan-kazo ny hazo. Maka ny fotoana mba hijery ny zava-drehetra indray mandeha, nijanona nandritra ny alina ao ireo mahafinaritra ny fiainana-ny fanomezana toerana (ao koa ny trano fandraisam-bahiny, be dia be ny lasy dimy amby roa-polo satro-boninahitra isan-alina). Ao Balestrand isika no nihaona björk ny mpanakanto sy ny mpitari-dalana izay teraka eto enimpolo taona lasa izay. Na oviana na oviana izy ravina ho ela ireo toerana ireo. Fitsidihana izany dia manomboka, toy ny mahazatra fanamafisana ny sasany tsara tarehy ballad.
Tao anatin'ny ora iray, dia nihaino ny maro ny angano sy ny zava-misy ara-tantara isika, dia mijery ny tanàna amin'ny alalan'ny maso hafa.
Dia izao, mba hanandrana ny ody lasopy ny resabe? mitsiky atao hoe mahay, nanontany björk. Ary manasa tao an-tranony atrikasa. Raha ny vadiny dia ny hoe mamorona ao an-dakozia, dia jereo ny asan'ny mpanakanto sy ny rakitry ny ela fa fanaka an-trano sy ny farany dia nipetraka teo amin'ny latabatra. Ny saosy ny anana, mousse ny kesika fanjaitra, deer hena marinated amin'ny divay mena, ary, raha ny marina, ny Troll lasopy, toy izany koa amin'ny tsiro ny holatra Resabe mandeha hazo, tendrombohitra, na ala fanahy, izay indraindray bewitch ny olona. Fa raha ny fitiavana, ny toerana misy anao, ny Troll dia hiaro anareo sy ny fianakavianareo. Jereo ny Fiangonana, sy manaraka ny lehibe boulder? Eto ny Troll, mampiseho björk amin'ny varavarankely.
Lazao azy ireo fa tiako Norvezy ary azo antoka fa ho azo indray ireto, ka jereo ny miasa hatrany mba.
Fiarahana ho an'ny olon-dehibe tsy misy fisoratana anarana maimaim-poana Chatroulette maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana amin'ny chat roulette amin'ny zazavavy hihaona ho an'ny fivorian'ny ny firaisana ara-nofo Niaraka watch video mampiaraka hijery ny pejy mahazatra ny maso phone manirery vehivavy te-hihaona fiarahana tsy misy fisoratana anarana